Tetikasa Matoy- Vakinankaratra : hifarana ny fiaraha-miasa | NewsMada
Tetikasa Matoy- Vakinankaratra : hifarana ny fiaraha-miasa
Miara-miasa ny faritra Vakinankaratra sy ny fandaharanasa Matoy amin’ny sehatra maromaro. Ao anatin’izany ny fanatsarana ny fampidiran-ketra, ny fametrahana mpandraharaha vaventy eo amin’ny lafiny fambolena miisa 21, tamin’ny alalan’ny tetikasa Faritra fampiasam-bola ara-pambolena (ZIA).
Nanomboka ny taona 2013 ny fiaraha-miasa ary maharitra telo taona. Amin’ity taona 2016 hifaranan’ny fiaraha-miasa ity, hifantoka amin’ny sehatrasa efatra lehibe ny fiaraha-miasan’ny roa tonta, mitentina 100 tapitrisa Ar. Ny fandrindrana ny fiarahamiombon’antoka, ny fitantanan-draharaham-panjakana, ny fanetsehana ny loharanom-bola, ny serasera sy ny fifandraisana, sns.
Manampy ireo, misy koa ny fandaharanasa fametrahana ny foibe antsoina hoe “Centre d’incubation d’appui technologique” (Ciat-Meva), miompana amin’ny famoronana tetikasam-pampandrosoana ho an’ny tanora any Vakinankaratra sy Menabe ary Amoron’i Mania.